Ku xir kumbuyuutarkaaga Xbox One si aad Mac | Waxaan ka socdaa mac
Ugu dambeyntii waad ku xidhi kartaa Xbox One xakamayntaada Mac-gaaga
Miguel Angel Juncos | | Gargaarka, Apple, Tababarada
Mar aan fogayn ayaan ku tusnay sida ku xir kumbuyuutar PS4 ah Mac-gaaga loo ciyaaro qaab ergonomic aad u badan dhammaan noocyada ciyaaraha ee OS X. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira in badan oo idinka mid ah oo ah in naqshadeynta xakamaynta Sony aysan si gaar ah u soo jiidanaynin dareenkaaga illaa inta raaxada laga hadlayo, oo doorbideysa wax badan oo hore ah qaabka Xbox One xakamaynta inuu ciyaaro. Marka maxaa dhacaya haddii aan dooneyno inaan isticmaalno xakamaynta Xbox One ee cusub, maaddaama aysan wax dhibaato ah ka qabin doonin sidaas laakiin ka duwan kan xakamaynta PS4, Xbox One kantaroolaha wuxuu u baahan doonaa inuu ku xirnaado Mac-ga fiilada USB-ga.
Xaaladdan oo kale fursad uma lihi inaan ku xirno iyada oo loo yaqaan 'Plug and Play' haddii aad haysato kantaroolaha PS4, laakiin dhinaca kale waxaa jira mashaariic aan rasmi ahayn oo noo oggolaan doona inaan ku xirno kantaroolaha annagoo ilaalinayna dhammaan ama ugu yaraan inta badan shaqeynaya, sida mashruuca Xone-OSX oo ay soo saartay FranticRain.
Xakamaynta Xbox Microsoft...
Si loo rakibo softiweerka awood u siinaya xakamaynta in lagu aqoonsado nidaamka, waxa kaliya ee aan sameyno waa inaan tagnaa bogga Xone-OSX iyada oo loo marayo xiriirkan oo soo dejiso nooca horey loo soo ururiyey si aad u socodsiiso xirmada rakibidda oo aad raacdo tilmaamaha shaashadda. Mar alla markii wax walba yihiin rakibnay dib ayaan u bilaabi doonnaa qalabka lagu hubinayo qalabka korontada laga hago ayaa nalalka kor u kacay.
Waxa soo socdaa waxay noqon doontaa in la aado guddiga doorbididda nidaamka, halkaas oo aan ku arki doonno qayb cusub rakibay oo loo yaqaan 'Xone Controller', kaas oo aan ku hagaajin doono badhamada, joysticks ...
Khasaaruhu waa taas ma aha 100% la jaan qaada dhammaan ciyaaraha, sidaa darteed qaar ka mid ah waxay u shaqeyn doontaa qeyb ahaan ama si toos ah ma shaqeyn doonto. Si kastaba ha noqotee, dhammaan kuwa aan fursad u helay inaan isku dayo waxay u shaqeeyeen si dhammaystiran. Waxaas oo dhan waxaa dheer, waxaa kale oo muhiim ah in la ogaado in aysan dib u soo celin doonin baytariyada ama batteriga xitaa haddii ay ku xiran tahay USB-da maadaama ay xogta kaliya wadato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Ugu dambeyntii waad ku xidhi kartaa Xbox One xakamayntaada Mac-gaaga
Salaan! Markii aad soo degsaneyso xirmada .zip, feylka REEDNE.md waxaa ku qoran inaad maamusho rakibayaasha. Laakiin ma ogi waxa rakibayaashu yihiin. Laba fayl iyo seddex feyl ayaa ka muuqda (2 laga bilaabo .md iyo mid kale oo shati ah ...) Hadaad cadeyn laheyd su'aasha ah sida loo rakibo, waxay noqon laheyd caawinaad weyn. Aad ayaad u mahadsantahay!
Qaamuus Degdeg ah oo Isbaanish-Ingiriis ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Mac
EZCast, beddelka ugu wanaagsan ee telefishanka casriga ah